Pump Diaphragm kwintengiso eshushu
ngomphathi ku 21-04-11
Ngokuqala kwentwasahlobo, ikhephu liyanyibilika ezintabeni, amanzi azisa ukuvuselelwa kwendalo, kodwa kwangaxeshanye, iphazamisa ukusebenza ezintabeni. Impompo uvalo ngoku idlala indima ebalulekileyo kuloo msebenzi. Iimpompo kwinkampani yethu ziye zaba "yinkwenkwezi" ...
Amathuba amatsha e-China-Latin America
I-LAC-China yorhwebo yorhwebo yayiphantse yazinza ngokugqibeleleyo kwi2020. Oku kuyaphawuleka kukodwa, njengoko i-LAC GDP yawa ngaphezulu kwepesenti ze-7 ngo-2020 ngokuqikelela kwe-IMF, ukuphulukana nokukhula kweshumi leminyaka. , kwaye ukuthengiswa kwezinto ezithengiswayo kumazwe angaphandle kwawa ngokubanzi (iZizwe eziManyeneyo ngo-2021). Nangona kunjalo, ngenxa yorhwebo oluzinzileyo ...
Imeko yoomatshini beRock Drill
Kule minyaka mibini idlulileyo, i-rock drill ye-air leg drill enegalelo elikhulu kwimarike inyukile, kunye ne-rock drill yenxalenye ye-high-one-shaped bit and small diameter button. Iqhosha elincinci elincinci njengeyona mveliso iphambili ekubambeni nakwintsimbi yesixhobo s ...